Cele News – Page2– Maharmedianews
သူများ WEDDING တွေကြည့်ပြီး လှလှလေးဝတ်ကာမင်္ဂလာဆောင်ချင်ပေမယ့် ယောက်ျားမယူခြင်သေးဝူးဆိုတဲ့ စံရတီမိုးမြင့်
January 22, 2020 admin555
စံရတီမိုးမြင့်ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေက သည်းသည်း လှုပ်ချစ်ရတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီး အရုပ်ကလေးလိုလှတဲ့ မင်းသမီးလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စံရတီမိုးမြင့်တစ်ခေတ်လို့ပြောရေ လာ က်အောင် ဗီဒီယိုကားတွေ အများကြီးရိုက်ခဲ့ရတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဆိုရင်လည်း မမှားပါ ဘူး။ သူကတော့ စိုင်းစိုင်း နဲ့ ဇာတ်ကားရိုက်ရမယ်
နှိပ်စက်ခံနေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံကသီရိလင်္ကာနိုင်ငံသို့ လှူဒါန်းလိုက်သည့်ဆင်ကို ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန် မလွယ်ဟုဆို….
သီရိလင်္ကာတွင် နှိပ်စက် ခံနေရသည်ဟု လူမှုကွန်ရက်၌ ပျံ့နှံ့နေသော မြန်မာနိုင်ငံမှ လှူ ဒါန်းထားသည့်ဆင်သည် မြန်မာ့ သစ်လုပ်ငန်းပိုင် ဆင်အဖြစ် ပယ် ဖျက်ထားပြီးဖြစ်၍ ပြန်လည်ခေါ် ဆောင်ရန် မလွယ်ကူဟု မြန်မာ့ သစ်လုပ်ငန်း မန်နေဂျာ ဒေါက်
ဇာတ်လမ်းတွဲ အသစ်နဲ့ ပရိသတ်တွေရှေ့ တစ်ဖန်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မယ့် ပရိသတ်အချစ်တော်အောင်မြင့်မြတ်….
အောင်မြင့်မြတ်ကတော့ ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်အားပေးခဲ့ရတဲ့ အိပ်မက်ဆုံရာ Season-5 ရဲ့ winner ဖြစ်ပြီးတော့ သီချင်းကောင်းပေါင်းများစွာကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ရေးစပ်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။အိပ်မက်ဆုံရာပြိုင်ပွဲကနေတစ်ဆင့် ပရိသတ်အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင့်မြတ်ဟာ ဒုတိယခြေလှမ်းအနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ဘက်ပိုင်းကိုပါလုပ်ကိုင်လာသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲအနေနဲ့ Canal+ မှာပြသခဲ့တဲ့ စာမျက်နှာသစ် Season 1,2
သံစဉ်မောင်ရဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ နေဒွေး…
လက်ရှိအချိန်မှာ လူစိတ်ဝင်စားအများဆုံး ဖြစ်နေတဲ့ မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် သံစဉ်မောင်နဲ့ သရုပ်ဆောင်နေဒွေးတို့ရဲ့ အရှုပ်တော်ပုံဟာ အခုချိန်ထိ အပြီးမသတ်နိုင်သေးပါဘူး။နေဒွေးကတော့ သံစဉ်မောင်နဲ့ကိစ္စတွေအတွက် ပြန်လည်ဖြေရှင်းလိုက်ပါပြီ။အခုလိုနောက်ကျမှ ဖြေရှင်းရတာကလည်း ရှောင်နေခြင်းမဟုတ်ပဲ ရှုတင်ရက်တွေ ဆက်တိုက်ရှိနေတဲ့အတွက် အလုပ်ကိုဦးစားပေးနေတာဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေရှင်းထားပါတယ်။ သံစဉ်မောင် အပေါ် ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်တယ်ဆိုတဲ့
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြီးကြောင့် သားလေးနဲ့ ခွဲနေရအုန်းမယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး…
နိုင်ငံကျော် သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ လွင်မိုးရဲ့ သမီးလေး ဖြစ်တဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး တစ်ယောက်ဟာဆိုရင်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ နုငယ်ပျိုမြစ်မှု တွေကြောင့်လည်း ပုရိသ တော်တော်များများက ဝန်းရံခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ သူမဟာ အိမ်ထောင်ကျပြီးတော့ ချစ်စရာသားလေးတစ်ဦးရဲ့
သစ်သီးသည် ဘဘဦးသိန်းထွန်းတို့ မိသားစုလေးဆီ အရောက်သွာပြီး လိုအပ်တာတွေကို ကူညီပေးခဲ့တဲ့ Sinon
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း Sinonကတော့ စည်ပင်တွေရဲ့ သစ်သီးတွေဖျက်စီးပစ်ခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ သစ်သီးသည် ဘဘဦးသိန်းထွန်းတို့ မိသားစုလေးဆီကို သည်ကနေ့တော့ အရောက်သွားခဲ့ပြီပဲဖစ်ပါတယ်နော်။Sinon ကတော့ အားငယ်နေသူတွေ ဆင်းရဲသူတွေကို လူသားခြင်းစာနာမှုအပြည့်နဲ့ အမြဲတစေ ကူညီဖေးမပေးတက်တာ ပရိတ်သတ်ကြီး အသိပါပဲနော်။ မြန်မာနိုင်ငံက သူ့ရဲ့ ဒုတိယအိမ်လို့တောင်
မွေးနေ့မှာ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ရင်သွေးလေးများဂေဟာသို့ အလှူးလေးလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ အိစိကွေ…
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် မင်းသားချောလေး အိစိကွေးကတော့ မနေ့က ဇန်နဝါရီလ (၂၂)ရက်နေ့လေးမှာ အသက်(၁၉)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အိစိကွေးကတော့ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းက ကလေးသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ အိစိကွေးက သူ့ရဲ့ (၁၉)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးမှာ မွေးနေ့အလှူလေးအနေနဲ့ မင်းသမီးချော
ချစ်ရတဲ့ အစ်မကြီးနှင်းဝတ်ရည်သောင်းအတွက် အမှတ်တရ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ မအေးသောင်း
အနုပညာလောကရဲ့ အကျော်အမော်လေးတွေဖြစ်တဲ့ နှင်းဝတ်ရည်သောင်း၊ အေးဝတ်ရည်သောင်း၊ ဆွိဝတ်ရည်သောင်း တို့ ညီအစ်မကို ပရိသတ်ကြီး သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ညီအစ်မသုံးယောက်စလုံးက ချစ်စရာကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုကိုယ်စီရှိတာမို့ ပရိသတ်တွေ အားပေးချစ်ခင်ခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် နှင်းဝတ်ရည်သောင်းက အိမ်ထောင်ကျပြီး နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ
ဆယ်ကျော်သက်မလေးတစ်ယောက်လို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပါးနေတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်ရဲ့ ပုံရိပ်
နိုင်ငံကျော် မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုံရွှေရည်က ပရိသတ် အခိုင်အမာနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ ထိပ်တန်း မင်းသမီးတစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက အနုပညာလောငထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်က အခုအရွယ်ထိတိုင် နာမည်လုံးဝမကျသွားပဲ အောင်မြင်မှုအပေါင်း သရဖူဆောင်းထားသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ်မှုံရွှေရည်က လက်ရှိမှာလည်း
ကြိုးစားပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ Original Gangster3ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရုံတင်ခွင့်ရအောင် ပရိသတ်တွေကို ဝန်ရံပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ယုန်လေး
ယုန်လေးကတော့ အဆိုတော်တစ်ဦးအဖြစ်သာမက လက်ရှိအချိန်မှာ ဒါရိုက်တာအဖြစ်ပါ ဇာတ်ကားကောင်းတွေကို ရိုက်ကူးနေသူတစ်ယောက်ပါ။ အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း ပရိသတ်ရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာစွဲနေစေမယ့် သီချင်းကောင်းများစွာကို ရေးစပ်သီဆိုခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဂီတနယ်ပယ်ထက် သရုပ်ဆောင်နဲ့ဒါရိုက်တာဘက်ကို အသားပေးပြီးလုပ်ကိုင်နေတာပါ။ လူငယ်ပီပီ နိုင်ငံခြားဆန်ဆန်အက်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူနေမှုပုံစံနဲ့အပ်စပ်အောင် ရိုက်ကူးလေ့ရှိတာမို့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ အမြင်တစ်မျိုးဆန်းစေတဲ့